Ipad - Bogga 3 - Geofumadas
Mashquul badan laakiin faraxsan
Wax badan in la sameeyo, oo doonaya in sanadka lagu xiro nabad wanaagsan, oo aad fasax ku gasho diiqad ka yar 2.5175. Sug waqti in la bilaabo dib u soo celinta geofumar habeenkii. Sidoo kale ku raaxeysiga qanacsanaanta qoyska badan. Gabadhayda, iyadoo ka faaiidaysanaysa iPad-ka. Waa wax lagu qoslo, waxay barteen isticmaalkeeda hortayda, hadda waa khabiir ...